January 2, 2020 - ThutaSone
မန်းတလေးမြို့ မန်တလာဆေးရုံကြီး၌”နာမည်ကြီး အဆိုတော် စိုင်းဆိုင်မောဝ်” ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရသဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်းသိရ”….
မူဆယ် နန်းခမ်းလမ်း ပိုင်ရှင်ကြီး အသက် ၇၁ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ကြီး စိုင်းဆိုင်မော့ဝ်ဟာ မြန်မာစတူဒီယို ခေတ်ဦးလောကမှာ … အထူးထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေဟာ ဒီကနေ့အထိ လူတွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ အထူး ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ “မောင်ပေးတဲ့ အချစ် ပြန်ဆပ်ခဲ့ပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို သီဆိုခဲ့တဲ့ ရှမ်း […]
ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားရေး ပိုင်သမျှမြေတွေကို ကျောင်းဆောက်ဖို့ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အာဖရိကမှ ဘုရင်မကြီး
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အာရှဒေသမှာ အထွန်းကားဆုံးဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ နီပေါစတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ အာရှမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ ဆိုရမှာပါ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အာဖရိကစတဲ့နေရာတွေမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွန်းကားခြင်းမရှိသေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေကို ယုံကြည်လက်ခံလိုက်နာကျင့်သုံးသူတွေများလာတာကြောင့် အဆိုပါဒေသတွေမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဟာထွန်းကားစပြုလာပြီဖြစ်ပါတယ်… ခုလည်းပဲ […]
”အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် မှ လက်ဆယ်ချောင်းလုံး အချိုးခံထားခဲ့ရတဲ့ သမီးလေးကို လူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားအောင်” မေတ္တာနဲ့ ကုသခွဲစိတ်ပေးခဲ့သောဆရာကြီး”…..
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် မှ လက်ဆယ်ချောင်းလုံး အချိုးခံထားခဲ့ရတဲ့ သမီးလေးကို လူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားအောင် မေတ္တာနဲ့ ကုသခွဲစိတ်ပေးခဲ့သောဆရာကြီး….. ဆေးရုံကြီးမှာ အရိုး အကြောဝေဒနာရှင် လူနာပေါင်းများစွာကို နူးညံ့သောစကားများပြောကြားပေးရင်း လူနာရှင်တွေရဲ့ဝေဒနာတွေကို ပျောက်ကင်းအောင် စေတနာအပြည့်နဲ့ ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာကြီး…… ဘဝမှာ ကိုယ်အလေးစားရဆုံး မြင့်မြတ်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်များထဲမှ တဦးဖြစ်သောဆရာကြီး ဦးခင်မောင်မြင့် ……. သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီး […]
အဆိုးရွားဆုံးရာသီဥတုကို ခံရဖွယ်ရှိနိုင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေပိုင်း
အထက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမိုးရွာမယ် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၃ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မကွေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေပိုင်း နေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိတ်စိတ် ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံး ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေပိုင်းတို့တွင် နေရာအနှံအပြားမိုးရွာသွန်နိုင်ပြီး ရာသီဥတုဆိုးရွားပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်… အဆိုပါဒေသတွေဆီသိုိ့ ခရီးထွက်ခြင်းကို ဇန်နဝါရီလ ၆ရက်နေ့အထိ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ် ရေထိမခံနိုင်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူများ ရိတ်သိမ်းအခြောက်လှမ်းနေတဲ့ […]
မေသန်းနုကို အလုပ်နှင့် ထောင်တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပြီ
သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုကို အလုပ်နှင့် ထောင်တစ်နှစ်ချ” ဇန်နဝါရီ ၂ရက် ရန်ကုန် – လိမ်လည်မှု ပုဒ်မ ၄၂၀ ဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုကို ယနေ့တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးက အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်သည် မေသန်းနုကို တရားလိုဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ကျပ်သိန်း ၁၂၀၀ လိမ်လည်မှုဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် […]
”ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေအသင်း”(မရမ်းကုန်း)မှ အမှုလိုက်ပေးမည်…..
ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေအသင်း(မရမ်းကုန်း)မှ အမှုလိုက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်ဇော်(မရမ်းကုန်း)က ပြောသည်။ “ဆရာတို့က အမှုကိုအလကားအကုန်လုံးတော့အခမဲ့လိုက်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး အမှုကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူအစွပ်စွဲခံနေရတဲ့သူ။ အဲဒီမှာသူကခရီးစရိတ် ရုံးစာရွက်စာတမ်းစရိတ်တော့ သူစိုက်ပေါ့လေ။ကျန်တဲ့ ရှေ့နေခ သိန်းနဲ့ချီအရင်တုန်းကလိုပေးစရာကုန်စရာမလိုဘူး။ ဥပမာ- ပြောရရင် အရင်ကအစိုးရဆေးရုံတွေ အကုန်အခမဲ့ပဲလေ။နောက်ပိုင်းသူလည်းမတတ်နိုင်တော့ စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေးဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီသဘောပဲ။ စရိတ်မျှပေးပေါ့။ ဆရာတို့က ဥပဒေအကူအညီပေးမယ်။ […]
နိုင်ငံပေါင်း (၉၀)ကျော်က အလှမယ်တွေကိုကျော်ပြီး Winner ဆုကြီးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ် ဟန်နီချို
မကြာသေးမီက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Mrs Universe ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိမ်ထောင်ရှင်အလှမယ်ပွဲကြီးမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြုအလှမယ်အနေနဲ့ မဟန်နီချိုက သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Mrs Universe (2019) Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကြီးမှာတော့ နိုင်ငံပေါင်း (၉၀)ကျော်က နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်တွေပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်နီချိုကတော့ Mrs Universe (2019) Winner […]
”တောင်ပေါ်လမ်းတွေကို အိမ်သုံးကားဖြင့် မောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေသိထားပါ”
ချစ်မိတ်ဆွေများ တောင်ပေါ်လမ်းတွေကို အိမ်သုံးကားဖြင့် မောင်းတော့မယ်ဆိုရင် အော်တို ဂီယာအသုံးပြုသူများ မြင့်မားသော တောင်အတက်များတွင် အဲယားကွန်း မဖွင့်ပါနှင့်၊ တောင်တက်ရန်အတွက် Second ဂီယာဖြစ်သော S,2တို့ဖြင့်သာ တောင်တက်ပါ D သာပါသော အော်တိုကားများတွင် Manual ပြောင်း၍ တက်သင့်ပါသည် ဒီဇယ် Pickup […]
ကော်ဖီဆိုင်ရှင် ဆေးရုံတက်ရလို့ ဖောက်သည်မပျက်စေရန် ပြိုင်ဘက်ကော်ဖီဆိုင်က လာကူရောင်းပေး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်မှာ ကော်ဖီဆိုင် နှစ်ဆိုင်ဟာ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းထားကြပါတယ်။ စီးပွါးရေးအရ ရန်သူတွေပေါ့ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်က ဘဏ္ဍာရေး အခက်အခဲ ကြုံလာရချိန်မှာ တခြားဆိုင်က လာရောက်ကူညီကြပါတယ်။ The Local Coffee Company ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးဖွင့်ခဲ့တာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒေ့ဗ်နဲ့ တီနာ […]